Fampidiran-drivotra ny fanamafisana ny fitsaboana
Home / Applications / Hira fisaorana / Fampidinana fampidirana induction
Sokajy: Hira fisaorana Tags: induction, miteraka hafanana fanalefahana, Induction shrink fitify, milina fampitaovana mitaky fihenam-bidy, miteraka hafanana famindrampo, RF milina fampitaovana mety mihemotra, fihenan'ny rafitra mety
Induction shrink fitify dia manondro ny fampiasana teknôlôjian'ny fitaovana fanalefahana ho an'ny metaly mialoha ny hafanana eo anelanelan'ny 150 ° C (302 ° F) sy 300 ° C (572 ° F) ka mahatonga azy ireo hanitatra sy hamela ny fampidirana na ny fanesorana singa hafa. Amin'ny ankapobeny dia ny fampihenana ny mari-pamantarana ambany kokoa amin'ny metaly toy ny aluminium sy ny toetrandro ambony dia ampiasaina amin'ny metaly toy ny kambana kambana ambany sy ambany. Ny dingana dia misoroka ny fanovana ny toetra mekanika, raha toa ka mamela ny fitaovana ampiasaina. Ny metaly dia mihamitombo ho setrin'ny fanafanana sy ny fifanarahana amin'ny fahandroana; Ity valim-bavaka natokana ho an'ny fiovan'ny hafanana ity dia noheverina ho endri-pandrefesana ara-thermaly.
Fanamorana ny induction dia tsy fisian'ny fanamafisana ny fifandraisana izay mampiasa ny fitsipiky ny indrisy elektrikmagnetika mba hamokarana hafanana amin'ny sehatry ny asa. Amin'ity tranga ity, ny fanitarana hafanana dia ampiasaina amin'ny fampiharana mekanika mba hifanaraka amin'ny ampahany, ohatra ny bushing azo apetaka amin'ny zana-kazo amin'ny alàlan'ny fanaovana ny savaivony anatiny ho kely kokoa noho ny savaivon'ny hazo, avy eo manafana azy mandra-pahatongany eo ambonin'ny hazo. , ary mamela azy hangatsiaka aorian'ny nanosehana azy teo ambonin'ny zana-kazo, ka nahatratrarana 'fintina'. Amin'ny alàlan'ny fametrahana fitaovana conductive ho any amin'ny sahan'andriamby mifandimby, ny herinaratra dia azo atao mikoriana amin'ny vy ka miteraka hafanana noho ny2R ny fahabangana amin'ny fitaovana. Ny famokarana ankehitriny dia mitrandraka amin'ny ankapobeny. Ny halalin'io onja io dia notononin'ny hafatr'io tanimbary io ary ny fiverimberenan'ny fitaovana. Ny fantson-drivotra fananganana tohodrano dia miditra amin'ny sokajy roa lehibe:
• Ny fitaovam-pandaharana dia mampiasa ny foza (vy)
· Toe-karena (electronics) MF sy RF Induction Heater
Fiatoana fanasitranana fihenam-bidy